dhibcood Sales - Wenzhou Safewire Electric Co., Ltd
Dammaanadda iibinta kadib
Wararka & baloogyada
Technical saldhigga aqoonta
dhibcood Sale of Safewire productsPlug iyo Play:
terminal The insert ama xir block terminal yahay siduu u qorsheysay in naftaada ay si degdeg ah u bilaabaan rakibida. Ma aha oo kaliya ee accessories, laakiin dhow cover-saxan heerka ilaalinta IP55 sidoo kale leh xoog degdeg ah korontada iyo talooyin xogta shaqeyn karaan. helitaanka degdeg ah ayaa weli muhiim ah in dadka isticmaala, sababtoo ah xarunta iyo qalabka elektarooniga ah u baahan yahay in lagugu xiro oo lagu eedeeyay in waqti.
channels cable dhow dhex mari hoose ee meelaha shaqada. Xogta iyo korontada la kala saari karaan. channels ayaa kasoo muuqan jiido-ilaalinta iyo goobaha kale ee sida caadiga ah. Cable in billowda dabaqa si toos ah ka heli kartaa nidaamka trunking dahsoon.
Midaynaysa multi-saldhig oo xogta ama gaadmada ah audio galay mid ka mid qalab dhameystiran, qarsoon hoos alaabta ama golaha kaliya 80mm godka dhexroor si loo badbaadiyo meel bannaan oo dheeraad ah.
Oo ay ku jiraan dhamaystiran 45 * godka 45mm, dual xeedho USB Kismaayo ee 5VDC 3.0 sida USB danab-buuxa lacag deg deg ah smart, taageero QC3.0, Qaadashada QUALCOMM chip travel. heerka qaab beddelidda Power gaari karaan 80%. Ma la xidhiidha silig oo keliya, laakiin taageero sida wireless function xukun doorashada heer QI ah.
godka dabaqa sii galay ku biiro ama qalab ku xiran yihiin si fudud loo heli. Waxay ku yaalaan hoos coverplate ka saari ama albaaka iyo waxaa laga heli karaa in ahama ama naxaas. Intaas waxaa sii dheer, farsamo pop-up our goor wanaagsan doonaa si tartiib tartiib ah ugu xataa xawaaraha taas oo hagaajin karo. Astaamaha u gaarka ah hab pop-up waa waqti dheer ah nolosha, qaab lagu kalsoonaan karo, buuq yar iyo shaqeeyaan iwm ammaan Fikirkan qalab Esplanaden ayaa lagu xiranayo by Safewire.
Ammaanka waardiyayaasha iyo nacas-caddayn design
Most of our godka korontada waa la kala duwan ee hawlaha ilaalinta caaqil oo ay ku jiraan ilaalinta culaysiyo, ilaalinta ka badan-meel gaarka, ilaalinta ka badan-danab, ilaalinta circuit gaaban, danab hoos-ilaalinta, ilaalinta dollar iwm
Intaas waxaa sii dheer, design novel for our guddi xajiya siman la tumo sida 180 degree marka ay furan tahay. Waxaa ilaalin kartaa dhici dib inta lagu guda jiro rakibaadda. dekedda ay ku nabadgeli karaan bixitaanka cable keeni kartaa cable silig ka mid ah godka dhulka iyo wax ku ool ah ee ilaaliso maqaarka ku cable silig ka dhanka ah waxyeello. Ra'yiga Exit Cable ayaa la xiranayo by Safewire.
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2018: Dhammaan Reserved Rights. Taageero farsamo: globalso
KU DAR: dabaqa 2aad, Beerta Xoolaha, Magaalada Liushi, Magaalada Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, Shiinaha